Huawei က nova Y90 စမတ်ဖုန်း ကို ပြည်ပ မှာ မိတ်ဆက် – Pandaily
Huawei က nova Y90 စမတ်ဖုန်း ကို ပြည်ပ မှာ မိတ်ဆက်
Jun 24, 2022, 12:51ညနေ 2022/06/24 14:05:39 Pandaily
Huawei ဟာ မကြာသေးခင်က သူ့ရဲ့ တရားဝင် ဝက်ဘ်ဆိုက် မှာ အမည် ပေးထားတဲ့Qualcomm Snapdragon 680 Chip နဲ့ မောငျးနှငျ ထားတဲ့ nova Y90.
“ Indus Rain” လို့ အမညျ ပေးထားတဲ့ နာမညျကွီး တရုတျ ဘလော့ ဂါ တဈယောကျ ကတော့ ဒီ ကိရိယာ ဟာ တရုတျ နိုငျငံမှာ မိတျဆကျ မယျ့ Enjoy 50 Pro ဖွဈပွီး ၆. ၇ လကျမ LCD မကျြနှာပွငျ နဲ့ 1080 × 2388 resolution နဲ့ 90Hz refresh rate နဲ့ 270Hz touch sampling rate တို့ ပါဝငျကွောငျး ထုတျဖျော ပွောကွားခဲ့ပါတယျ။
HUAWEI nova Y90 (Credit:Huawei)
ဖုနျး ရဲ့ အရှညျ က ၁၆၃. ၃ မီလီမီတာ၊ အကယျြ က ၇၄. ၇ မီလီမီတာ၊ အမွငျ့ က ၈. ၄ မီလီမီတာ နဲ့ အလေးခြိနျ က ၁၉၅ ဂရမျ ဖွဈပါတယျ။ ဒါ့အပြင် အနောက် ဘက်မှာ 50 MP f/1.8 Main Camera နဲ့2MP Macro နဲ့ Depth of Field Lens နှစ်ခု တပ်ဆင် ထားပါတယ်။ အရှေ့ ဘက်ခြမ်း မှာ f/2.08MP Pierce အရှေ့ ကင်မရာ တပ်ဆင် ထားပါတယ်။
အခြား နေရာ တွေမှာတော့ HUAWEI nova Y90 မှာ 5000mAh Battery တပ်ဆင် ထားပြီး 40W Super Fast Charging ထောက်ပံ့ ထားပါတယ်။ ကုမ္ပဏီက မိနစ် ၃၀ အတွင်း ၅၀ ရာခိုင်နှုန်း အထိ ကောက်ခံ မယ်လို့ ကတိပြု ထားပါတယ်။ ဗားရှငျး အသဈ မှာ EMUI 12 ကို ကွိုတငျ ထညျ့သှငျး ထား ပမေဲ့ ဘယျ အနျးဒ ရှိုကျ ဗားရှငျး ကို အခွခေံ ထားတယျ ဆိုတာ ကိုတော့ Huawei က မပွော ခဲ့ပါဘူး။
လက်ရှိမှာတော့ nova Y90 ကို 8 + 128GB storage နဲ့ သာ ထုတ်လုပ် ထားပြီး Crystal Blue, Pearl White, Emerald Green နဲ့ Midnight Black အရောင် လေး မျိုး နဲ့ ထုတ်လုပ် ပေးထားပါတယ်။ Huawei ကတော့ ဒီ ပစ္စည်း ရဲ့ ဈေးနှုန်း ဒါမှမဟုတ် စတင် ရောင်းချ မယ့် ရက် စတဲ့ အချက်အလက်တွေကို ထုတ်ပြန် ခြင်း မရှိသေးပါဘူး။
Huawei Enjoy 50 Pro ကို တရုတျနိုငျငံ စကျမှုနှငျ့ သတငျးအခကျြအလကျ ဝနျကွီးဌာန မှာ တရားဝငျ မှတျပုံတငျ ထားပါတယျ။ ဘက်ထရီ စွမ်းဆောင်ရည် 5000mAh ဖြစ်ပြီး 40W အား အမြန် သွင်း နိုင်စွမ်း ကို ထောက်ပံ့ ပေးထားပြီး 3.5mm headphone jack ကို ထိန်းသိမ်း ထားကာ ဘေး ဘက်မှာ fingerprint recognition unlock ကို တပ်ဆင် ထားကာ HarmonyOS ကို တပ်ဆင် ထားကာ အရှေ့ ဘက်မှာ 6.7-inch LCD screen ကို 2388 × 1080 resolution နဲ့ တပ်ဆင် ထားပါတယ်။
Huawei က Nova 10 စမတျဖုနျး စီးရီး သဈကို ပွီးခဲ့တဲ့ လကုနျ ပိုငျးမှာ ကွညော ခဲ့ပါတယျ။ တရုတ် နိုင်ငံရဲ့ နာမည်ကျော် နည်းပညာ နယ်ပယ် ဘ လော့ ဂါ တဦးရဲ့ နောက်ဆုံး ရ သတင်း တွေအရ ထုတ်လွှင့် မှုကို ဇူလိုင်လ အစောပိုင်း အထိ ရွှေ့ဆိုင်း ထား မယ်လို့
Gadgets Jun 14 ဇှနျ 14, 2022